अपराध रोक्न प्रहरीलाई जनताबाट के चाहिन्छ ? (हेर्नुहोस् बिस्तारमा) – Pahilo Page
दाङ । केही घटना वा अपराध भएमा हामीले तत्काल प्रहरीलाई सम्झिन्छौं र प्रहरीले सहयोग गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्छ । तर, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले आमजनता, सरोकारवालाबाट के चाहन्छ ? के आमनागरिकको सहयोगबिना प्रहरी संगठन एक्लैले अपराध अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुराउन र नियन्त्रण गर्न सक्छ ?
यसको एउटै जवाफ हुन्छ, सक्दैन । दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही दाङको संयुक्त आयोजनामा दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको सभाहलमा भएको एउटा कार्यक्रमका सहभागीहरुले यो विषय खोतल्ने प्रयास गरेका छन् ।
“व्यवसायी र प्रहरीबीच सहकार्य र समन्वयले दाङ जिल्लालाई व्यवसायीहरुका लागि सुरक्षित जिल्ला बनाउन प्रहरीलाई सहयोग पुग्छ”, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले प्रहरी र सम्बद्ध व्यवसायीहरुबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले कानुनी ज्ञान र अपराध अनुसन्धान कार्यमा व्यवसायीहरुले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता, अपेक्षित बिषयहरुका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए । उनले व्यवसायीहरुका जिज्ञासा तथा गुनासाहरुको बारेमा पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हेमराज बन्जाडेले प्रहरी र व्यवसायीहरुबीचमा व्यवसायीको सुरक्षाको लागि यस्ता कार्यक्रमहरु सहयोगी हुने बताए । आगामी दिनमा पनि व्यवसायीहरुले प्रहरीबाट यस्तो अग्रसरताको अपेक्षा गरेको धारणा पनि उनले राखे ।
दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हेमराज बन्जाडेको अध्यक्षता र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको थियो । त्यस अवसरमा दाङ जिल्लामा रहेका विभिन्न पेशासँग सम्बद्ध व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति : मङ्गलवार, साउन २४, २०७४ समय : १६:५१:१३ 993 पटक पढिएको